सधैँ मुड अफ हुन्छ ? यसरी गराउनुस् फ्रेस – Etajakhabar
सधैँ मुड अफ हुन्छ ? यसरी गराउनुस् फ्रेस
काठमाडौं – हामी धेरै समय चिन्तामा गुज्रिरहेका हुन्छौँ । हामीलाई सधैँ खुसी रहन विभिन्न खालका चुनौतीले बाधा पु¥याइरहेको हुन्छ । सोही कारण चाहेर पनि खुसी हुन सकिँदैन । यसले गर्दा शारीरिक, मानसिक र भावनात्मक रूपमा अस्वस्थ भइरहेका हुन्छौँ । त्यसो भए निरन्तर खुसी रहन के गर्ने त ? अथवा मुड फ्रेस गराउन के गर्ने त ? आफ्नो शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्यका लागि तनावलाई व्यवस्थापन गर्दै यसरी आफ्नो मुड फ्रेस गराउन सक्नुहुन्छ :
व्यस्त एवं तनावपूर्ण समयमा ध्यानको महŒव धेरै छ । नियमित ध्यानको अभ्यासले तनावलाई व्यवस्थापन गरी आनन्द बढाउँछ । ध्यानका धेरै विधिमध्ये आफूलाई सजिलो लाग्ने विधिको अभ्यास गर्न सकिन्छ । जब मुड अति नै बिग्रन्छ, त्यतिवेला गहिरो लामो श्वास लिने र छाड्ने गर्न सकिन्छ । यसले मुडलाई तुरुन्त बदल्न सहयोग गर्छ । नयाँ पत्रिकाले छापेको छ ।
प्रकाशित मिति: बिहिबार, भाद्र २९, २०७४ समय: ७:५४:४८